Omenala Ndị Ejiri Omenala
New Factory Gaoyi Alaka malitere ulo oru!
1. Maka mkpọpụta okwute a zụrụ ọhụrụ, n'ihi usoro nchekwa nke nnabata, a ga-enwe mmanụ mgbochi na-emegide nchara n'ime. Gbalia ihu na itusasi ma wepu ya tupu ojiji, ma mee mmanu mmanu n’akuku niile na - agaghari. Tupu ọrụ ga-agbanye a sm ...
Factorylọ ọrụ mmepụta ihe ọhụrụ anyị dị na Gao yi Hi tech mpaghara, ugboro atọ karịrị ụlọ ọrụ ochie, ahịrị abụọ na-emepụta ihe karịa ụlọ ọrụ ochie, na-eji ngwa ọrụ ọhụụ na ngwa anyị nwere ike gboo mkpa ndị ahịa. Ihe a hotara bu udiri ihe pneumatic nke eji otutu ebe na Ngwuputa ind ...
A na-egweri ilu kwa afọ na mmeghe ụlọ ọrụ mgbe ememme ụbọchị opupu ihe ubi wee bụrụrịị mgbakọ na Qihong, ọ na-egosi ọrụ otu dị mma n'etiti ndị otu Qihong. Ihe malitere ọrụ ahụ bụ mgbe ụlọ ọrụ ahụ bidoro, n'oge ahụ anyị nọ na trou…